Nhau - Ndezvipi zvakanak zvekushandisa zvakasiyana zvigadzirwa zvekukura kukuru
Kuti usangane nehunyanzvi zvinodiwa zvevatengi vayo panguva yekushanda kwemahombekombe mashini, iyo yekushandira inofanirwa kuve yakanyatsoiswa panzvimbo yakatarwa pane chishandiso chishandiso panguva yekushandiswa. Kuti udzivise iyo yekushandira panguva yekugadzira michina. Kana kusuduruka kukanganiswa nemasimba ekunze senge yekucheka simba uye giravhiti, imwe kiringi inofanira kushandiswa kukochekera iyo yekushandira kuti irambe yakamisikidzwa nzvimbo isina kuchinjika. Ndezvipi zvakanakira kushandisa akasiyana machira ekukura kukuru?
Zvakanakira kushandisa Q235A (A3 simbi) yemakemikari makuru
Chinhu chikuru chakanakira mashandiro makuru ekugadzira michina ndechekuti ine mapurasitiki akakwirira, kuomarara uye mashandiro emoto pane imwe nhanho. Iyo yose chigadzirwa ine imwe yekutsika mashandiro uye kutonhora kukotamisa kuita. Inonyanya kushandiswa kune zvinodiwa kana ichishandiswa. Mune yakadzika-chikamu chikamu chemuchina zvikamu uye zvakasungwa zvikamu zveakarongeka, senge tambo matanda, ekubatanidza matanda, mapini, shafts, screws, nzungu, mabhureki, mabheseni, nezvimwe.
Zvakanakira kushandisa 40Cr pamashini makuru
Yakakura-pamatanho machining ichave neakanaka kwazvo akazara echimakanika zvivakwa, yakaderera tembiricha kukanganisa kuomarara, yakaderera notch kunzwisisika uye kwakanaka kuomerera kune imwe nhanho mushure mekudzima uye tempering. Simba repamusoro rinogona kuwanikwa kana mafuta-atonhorera, uye zvikamu zvinowanzoitika kutsemuka kana mvura-yatonhorera. Mushure mekupisa kana kudzima uye kupisa, iyo machinability yakanaka, asi iyo weldability haina kunaka uye kutsemuka kuri nyore kuitika.
Kana muchina uchinge washandiswa, unonyanya kushandiswa kumhanya-mhanya inofambisa michina zvikamu mukugadzirwa kwekugadzira mushure mekudzima uye kupisa, senge chishandiso chayo giya, shafts, makonye, ​​nezvimwe. yaishandiswa kugadzira zvikamu nehupamhi hwekuoma uye kupfeka kuramba, senge magiya, shafts, chokurukisa, crankshafts, chokurukisa, maoko, pini, yekubatanidza matanda, nezvimwe.
Mushure mekudzima uye kupisa mukati mepakati tembiricha, inoshandiswa kugadzira inorema-basa, yepakati-inomhanya inofambisa michina zvikamu, senge mafuta pombi rotors, inotsvedza, magiya, spindles, nezvimwe. Mushure mekudzima uye yakaderera-tembiricha tempering, inoshandiswa gadzira rinorema-basa, rakaderera-rova, kupfeka-risingagadzirwe michina zvikamu, zvakadai sehonye, ​​chokurukisa, uye miseve. Panzvimbo yekabhoni, zvikamu zvekutapurirana zvine hukuru hwakakura uye kukwirira kwakadzika-tembiricha kuomarara, senge shafeti, magiya, nezvimwewo.
Kubatsira kwekushandisa makumi mashanu neshanu pamatanho makuru
45 # ndeyemhando yepamusoro kabhoni simbi simbi, uye parizvino ndiyo inowanzo shandiswa svikiro-kabhoni yakadzimwa uye yakapfava simbi.
Mukuita kwekushanda, ichave iine yakanaka kwazvo yakazara mechikari zvivakwa. Iyo ine yakaderera kuomarara panguva yekushandisa uye inowanzo kutsemuka panguva yekudzimisa mvura. Izvo zvakaomeswa zvikamu zvinofanirwa kuve zvakafanogadziridzwa zvisati zvasungwa uye kusunganidzwa mushure mekusimbisa.
Inonyanya kushandiswa: kugadzira yakakwira-simba mehendi inofamba zvikamu, senge impellers, mapiston, shafts, magiya, racks, honye, ​​nezvimwe.